PSA Nitrogen/Oxygen Generator Na-enye ihe ngwọta nrụpụta gas na saịtị yana ọrụ otu nkwụsị zuru ụwa ọnụ.
☆ Elu ntụkwasị obi na arụmọrụ
☆ Ọnụ ego ọrụ dị ala
☆ Njikwa akpaka zuru oke
☆ Ngwa buru ibu.
Dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, nye nitrogen / oxygen dị ọcha.
Okwu mmalite nke PSA Technol...
Usoro PSA Nitrogen ...
Ụkpụrụ nke Hydrogenati ...
Ihe mejupụtara PSA Oxyge...
Methanol ire ere ...
Okwu Mmalite jụrụ W...
Okwu mmalite ikuku compr...
Ka afọ ju custo...
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shan Dong Binuo Mechanics Co.,Ltd. bụ ọkachamara ọrụ nkewa ikuku otu nkwụsị, nke dị na Weifang Binhai, Shan Dong Province nke China. Ogologo azụmahịa na ọrụ na-ekpuchi ụwa niile.
Isi ngwaahịa bụ nitrogen & oxygen ọgbọ, gụnyere imewe, mmepụta, ahịa, echichi, mgbe-ahịa na mmezi ahaziri ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, oke ngwaahịa a na-ekpuchikwa akụrụngwa akụrụngwa, dị ka nhazi ikuku ikuku, onye na-emepụta mmanụ dizel na chiller mmiri jụrụ oyi site n'inye ndụmọdụ, ire ahịa, mgbe ọrịre na ọrụ ndozi.
Ọnụọgụ oxygen gbazere (DO) na biya na-emetụta ogo biya. Oxygen ga-eme ka mmebi ahụ dịkwuo ngwa ma belata oge nchekwa. Ihe mebiri emebi bụ nke a: 1. Mee ka ụcha biya na agba aja aja na-acha uhie uhie; 2. Diacetyl rebound iji mepụta uto astringent na ịka nká; 3. Haziri turbidity na-adịgide adịgide; 4. Mebie ihe na-esi ísì ụtọ, ísì ụtọ nke hops ga-apụ n'anya ngwa ngwa. Ọtụtụ ebe a na-eme mmanya nwere DO dị elu ma dabere na antioxidan ...
A na-eji ihe ọkụkụ nitrogen eme ihe n'ọtụtụ ebe na kemịkalụ, eletrọnịkị, ọla, nhazi nri na ụlọ ọrụ taya rọba. Enwere ike kewaa ya ụzọ atọ: 1.Cryogenic Air Separation Nitrogen Generator Nke a bụ usoro mmepụta nitrogen omenala, nke nwere akụkọ ihe mere eme nke iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ na-ewe ikuku dị ka akụrụngwa, mgbe mkpakọ na ịdị ọcha, wee mee ka ikuku banye ikuku mmiri site na ...
Na Ọkt 1, ụbọchị ahụ bụ ncheta afọ 72 nke ntọala PRC. Ndị ọrụ niile nke Shandong Binuo Mechanics Co., Ltd. na-achọ ka China nwee ọganihu na ọganihu. N'oge obi ụtọ a, ndị mmadụ sitere na ụdị ndụ niile malitere ogologo ezumike ha nke ụbọchị asaa na China. Ma, Binuo Mechanics akwụsịghị ọrụ anyị, na ndị ọrụ na-ere ahịa na-echere maka awa 24 iji dozie nsogbu ndị ahịa. Ruo n'elekere 5:00 nke abalị na October 7, 2...
Ọgwụgwụ nke Septemba 2021, Binuo Mechanics rụkọrọ ọrụ na Shengli Oilfield nke bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta pụrụ iche nitrogen generator maka ubi mmanụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị guzobere mmekọrịta nkwado nkwado ogologo oge, na Binuo Mechanics ga-enye ọrụ ahaziri ahazi nke ọgbọ nitrogen na compressor ikuku n'ime afọ ise na-abịa. A na-etinye akụrụngwa ahụ na ...
N'oge na-adịbeghị anya, Binuo Mechanics bupụrụ otu ihe ndọta na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide na-agbanwe ikuku compressor n'ụlọ ọrụ na-ahazi nri dị na Japan, a nabatakwara skru air compressor ma tinye ya na mmepụta. N'afọ 2020, Binuo Mechanics rụkọrọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahazi nri na Japan, wee bupụ ha otu setịpụ ihe ndọta na-adịgide adịgide na-agbanwe agbanwe ikuku ikuku. Onye ahịa nwere afọ ojuju ma na-emegharị ya nke ọma ...
Psa Nitrogen osisi, Hydrogen na Oxygen Generator, Atlas Copco Ngp, Ọgbọ ike hydrogen, Onye na-emepụta hydrogen, Psa Nitrogen,